Blogger Of The Week : Chandan Sapkota - MeroReport
Blogger Of The Week : Chandan Sapkota
बालुवाटारमा बस्ने चन्दन सापकोटा पेशाले अनुसन्धाता हुन् । अमेरिकाको डिकिनसन युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्र र गणितमा ग्र्याजुएट गरेका सापकोटा हाल साउथ एसिया वाच अन ट्रेड्, इकोनोमिक्स एण्ड इनवाइरोन्मेन्टमा रिसर्चरको रुपमा काम गर्दैछन । यसको साथै अङ्ग्रेजी दैनिक रिपब्लिकामा स्तम्भकारको रुपमा पनि लेखहरु लेख्छन । उनको शोखहरु हाइकिङ गर्ने र खाना बनाउने रहेको छ । लेख्न र रिसर्च गर्न मन पराउने सापकोटा यस पालिको साताको ब्लगर हुन सफल भएका छन् ।
ब्लग लेख्न कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो ?
मैले २००५ देखी ब्लगिङ गर्न सुरु गरेँ ।
म आर्थिक र बिकासको बिषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न र यही बिषयमा सुचना आदानप्रदान गर्न ब्लगिङ गर्छु ।
म दिनहुँ जसो ब्लगिङ गर्छु ।
खासगरी ब्लगमा कस्ता कुराहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ ?
मेरो ब्लग पोस्टहरु प्राय आर्थिक र बिकासका बिषयमा केन्दृत छन । म ब्लगमा आर्थिक र बिकासका बिषयमा पत्रिकामा निस्किएका लेखहरुलाई संक्षेपमा लेख्ने, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र अरुको लेखमा कमेन्ट गर्ने गर्छु ।
नेपाली ब्लगिङ क्षेत्र अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छ । ब्लगरहरु एउटा निश्चित बिषयमा केन्दृत भएर त्यसमा नै विशेषज्ञता हासिल गरेको पाइँदैन । हामी कहाँ सचेत ब्लगरहरुको जरुरी छ जसले आफ्नो धारणा बलियासँग राख्न सकुन् र अरुको लेखमा कमेन्ट गर्दा सही प्रमाण सहित सही आलोचना दिन सकुन् ।
तपाईसँग ब्लग लेख्दाको त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छ भने बताइदिनुस न ?
त्यस्तो खासै छैन । तर म ब्लगिङ गर्न एकदम रुचाउँछु । यसले मलाई भइरहेका घटनाको जानकारी लिन मद्दत गर्दछ । बिषेशत मसँग बिचार मिल्ने व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा रहन गर्न मद्दत गर्छ ।
तपाइलाइ पनि थाहा होला, यतिबेला हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ ?
कुनै पनि विषयमा सुसुचित आलोचना गर्नको लागि पनि यो जरुरी छ । म पनि आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्ने दश जना मध्ये एक हुँ ।
नेपालमा नागिरक पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न र सामाजिक संजालका रूपमा मेरो रिपोर्ट सुरू भएको छ। मेरो रिपोर्टलाइ केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले सम्म यो राम्ररी चलिरहेको छ । मेरोरिपोर्ट नेपाली ब्लग जगतमा अझ बढी देखियोस र सचेत ब्लगिङको लागि प्रवर्दन गरोस भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु ।
तपाइको ब्लगलिँक : www.sapkotac.blogspot.com
Comment by Rupen on December 6, 2011 at 4:43pm
Comment by Devi sapkota on December 1, 2011 at 11:53am
Comment by Kranti Darai on December 1, 2011 at 10:00am
Comment by Ajeeta Sigdel on November 30, 2011 at 3:17pm
Congratulations Chandan ji !!